December 04, 2010 6:00 am
जसले जो सक्यो त्यही गर्‍यो
भन्न त भनिएको छ, माओवादीले विद्रोह नै चाहेको छ । सक्यो भने उसले विद्रोह थालिदिन पनि सक्छ । सकेन भने सकेन । संसदीय पार्टीहरुले सके भने माओवादीलाई पेलेरै जान चाहन्छन् रे । राजनीतिक मूलधारमा समावेश गराउने कुनै समयमा एकीकृत भएर जाने भन्ने भएपनि पछिल्लो समयमा विभिन्न पार्टीगत विवादका कारण त्यो नाराले हावा खाएको छ ।
संसदीय पार्टीले पनि सकेसम्म पेलेरै जान्छन् भन्ने गरिन्छ, पेलेर गएनन् भने गएनन् । अर्थात नसकेपछि त के पो लाग्छ र । त्यसैले आफुलाई फाइदा र अरुलाई कमजोर बनाउने प्रयत्न त गरिरहेकै हुन्छन् । त्यही भएको छ, अहिले एउटाले अर्कोलाई कमजोर बनाउने बहाना अनि षडयन्त्रमै भासिएको छ, यो देशको परिस्थिति । यसलाई कसले पार लगाउने हो, ज्योतिषीले पनि जान्दैनन् ।
अहिले आएर सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री शंकर पोख्रेलले माओवादीले संसदीय प्रक्रिया नविथोल्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे मात्र संसद अधिबेशन आब्हान गर्न सकिने बताएका छन् । ए बाबा, माओवादीले संसदीय मान्यतालाई कहिले पो मान्छु भनेको छ र । त्यसैले कहिले उसले सांसद किन्ने कोकोहोलो मच्चाउँछ त कहिले संसदभित्रै ठेलमठेल हुन्छ, त्यो पनि मन्त्रीमाथि, बजेट पेश गर्ने बेलामा ।
त्यसो त माओवादीले पनि सरकार बनाउन नपाएको झोंक अनि अरुलाई कमजोर बनाउने प्रयासस्वरुप यो अवरोध पो खडा गरेको हो कि । यसै भन्न गाह्रो छ । तर नेताहरुको भनाई हेर्दा त यो कुरा लुकेकै छैन नि । आफ्नै पार्टीभित्र त खुट्टा तानातान गर्ने संस्कृति भएको यो समाजमा अन्य विचार, पार्टीलाई तल झार्ने प्रयत्न हुन्न भन्न कसरी सकिन्छ । यसअर्थमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका लागि दलहर मरिगए तयार छैनन् ।
बजारमा पनि त्यही छ । महँगी जस्ले बढाउन सक्यो, उसले जान्यो । अर्थात पैसा कमाउन पनि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा छैन । कमाई, आम्दानी पनि जसल सक्यो त्यही गर्‍यो भन्ने नै छन् अहिले । किनभने सरकारी स्तरमा काम गर्दा पनि व्यापारीलाई सजिलो छैन । त्यहाँ पनि यो नियम लागु हुने हुनाले कर्मचारीलाई घुस खुवाउनुपर्ने बाध्यता छ । जो बाध्यता उनीहरुले उठाउँछन्, उपभोक्ताहरुबाट । यसैबाट बिग्रेको सबै । - महेन्द्र ।
पैसाजति विदेशै फर्किने भयो
नेपालको विकासका लागि धेरै भन्दा धेरै पैसा विदेशीहरुले दिने गर्छन् । सहयोगका लागि धन्यवाद भन्दै लिंदै गरिन्छ, ठीकै छ, सरकारी अधिकारीहरुलाई भ्याइ नभ्याई नै हुन्छ । देशभित्र सदुपयोगको चिन्ता धेरै नै छ, कहीं धेरै भ्रष्ट्राचार भएको होला, कतै कम भएको होला । जे होस्, नेपाललाई सहयोग गरेका छन्, राम्रो कुरा हो ।
सहयोग गरेपनि त्यो पैसा उतै फर्किने सम्भावना झनै बढेर गएको छ । त्यो पनि राजनीतिक नेता र सरकारी अधिकारीहरुको भ्रमणका क्रममा । भ्रमणका क्रममा उनीहरुले आफ्ना कार्यकर्तादेखि सहकर्मी नेताहरुलाई सँगै लैजान्छन् । त्यो बाहेक अन्य नियमति खर्च त छँदैछ । त्यसको सबै बिल सरकारले तिर्नुपर्छ । त्यसरी हेर्दा साधारण खर्च भन्दै पैसाजति देशमा विकास गर्न छाडेर विदेशमै फिर्ता पठाउने काम भएको छ ।
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल रुसमा भएको बाघ सम्मेलनमा गएर र्फिर्ए लगत्तै अर्को विदेश भ्रमणमा लागेका छन् । रुसपछि उनी क्याम्बोडिया गएका छन् । क्याम्बोडियामा सरकारी भन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक भविष्यको चिन्ताले उनी त्यता गएका हुन् । अर्थात् राजनीतिक करियरको राष्ट्रिय उचाइलाई अन्तरराष्ट्रिय होराइजन दिन उनी त्यता गएका हुन् । अलि पछि गएको भएपनि हुन्थ्यो नि, कामचलाउ सरकारको प्रमुख भएको बेलामा ।
त्यतिमात्र होइन, देशमा सरकार नभएको पाँच महिना भइसकेको छ, तर नयाँ सरकार बनाउन सहयोग गर्न छाडेर उनी लागेका छन् विदेश भ्रमणमा । यो जत्तिको खतरनाक गैरजिम्मेवारी के होला खै, यो देशमा । जिम्मेवारी पुरा नगर्ने हो भने पनि कम्तीमा सरकारको पैसा खर्च नगरिदिए हुन्थ्यो नि । त्यसका लागि उनले निजी खर्चमा जान लागेको भनेर पत्रकारलाई भनिदिएको भए कति जाति हुन्थ्यो । तर के गर्ने, आशा गरेर मात्र नहुने रहेछ ।
वास्तवमा देशका समस्याप्रति नेताहरुमा हुनुपर्ने गाम्भीर्यता नभएको आरोप सही पनि हो । किनभने संविधान र शान्तिका ठुला ठुला गफ गर्नेहरु आफै भित्रको समस्याले जकडिएका छन् । माओवादीमा विस्तारित बैठक बोलाएर विवाद उर्लिएको छ । काँग्रेसभित्र पद नपाएर नेताहरुबीच लडामती छ । एमालेका अध्यक्षदेखि लिएर वरिष्ठ नेताहरु लर्को लागेर हवाइजहाजमा विदेशतिर । - महेन्द्र ।
वकिलको आवश्यकता रहेन पार्टीहरुमा
पद कुर्चीका लागि देशका कुन कुनामा विवाद छैन र केन्द्रमा नहोस् । केन्द्रमा त यसको दौड लिगलिगे दौडभन्दा बढी हुने भयो । माओवादीले पालुङटारजस्तो राजधानीबाट निकै टाढाको गाउँमा प्लेनम आयोजना गरेपनि, काँग्रेसले राजधानीको भव्य महलमा बैठक गरेपनि, एमालेले बल्खुको अग्लो भवनमा बैठक गरेपनि कुरो त उही रहेछ । उही भन्नुको मतलब कुर्ची र पदका लागि ठुलै बहस ।
पछिल्लो समय काँग्रेसमा भइरहेको पदको विवादलाई नियाल्दा यसअघिका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भए विवाद कसरी मिलाउँथे होला भनेर अहिले पो बहस हुन थालेको छ । उनी भएका भए यतिबेलासम्म विवाद जसरी भएपनि मिल्थ्यो कि भन्ने पनि छन् । त्यतिमात्र होइन, अहिलेको विवादलाई केहीले बडो सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । त्यो कसरी भने, यसअघि कहिल्यै नहुने गरेका बहस यसपालिदेखि सुरु भएका छन् ।
गगन थापाले भनेका छन् यो कुरा । तर काँग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाको सपना अधुरै रहने लक्षण देखिएपछि उनले सुशील कोइरालाले प्रस्ताव गरेका दुवै नाममा चर्को विरोध गरेकी छन् । उनले उपसभापति पाउने आश्वासन रहेछ भन्ने बुझिएको छ, अहिलेसम्मको अवस्थासम्म आइपुग्दा । उनीमात्र होइन, निकै सन्तुलित तरिकाले मनोनयन गरेको सोचेका सभापति कोइरालामा झट्का लागेको छ ।
आफ्नै पक्षका नेतालाई प्रस्ताव गर्दा आफ्नै नेताबाट विरोध खेप्नुपरेको छ भने कोइरालाले देउवा पक्षका नेतालाई मनोनयन नगरेको अवस्थ्ामा त्यो चरणको विरोध आउने क्रम झन् कति हुने होला निकै गाह्रो परिस्थिति आएको छ । पदको लोभ होइन भन्लान् दलहरुले, जिम्मेवारी हो भन्लान् । आखिर कुरा जति घुमाएर गरिएपनि हुने भनेको त्यही नै हो । जनताले बुझ्ने भनेको त्यही नै हो ।
धेरैजसो सदस्यले प्रस्तावित नाम सभापतिले फिर्ता लिएर सबैलाई मिलाउने गरी अर्को नाम पेश गर्न सुझाएका छन् । यसो नभए मतदानको प्रक्रियाबाटै टुंग्याउनुपर्ने धारणा ति सदस्यहरुको छ । मनोनयन गर्न पनि यत्रो विवाद । परिस्थितिलाई हेर्दा के लाग्न थालेको छ भने अब यी पार्टीहरुको चुनावै चुनाव गर्दा जीवन बित्ने भो । काम गर्ने कहिले हो, पत्तो छैन । - महेन्द्र ।
कराएर पनि दक्षिणा हराएजस्तो भयो
अन्य पार्टीभन्दा माओवादीको विस्तारित बैठक लगायतका भेलाले राजनीतिमा बढी तरंग ल्याउने गर्छन् । भुमिगत कालमा धेरै कुरा थाहा नहुने हुनाले त्यसबारेमा तुलनात्मक रुपमा कम चर्चा हुने गरेपनि पछिल्लो समयमा खुला राजनीतिमा आएपछि बैठकले गर्ने निर्णय भने झनै चासोको विषय बन्ने गरेको छ धेरैका लागि ।
त्यसो त बैठकमा हुने छलफल, विवादबारे सञ्चारकर्मीले आफ्नै विवेक प्रयोग गरेर लेख्न पाउने अवस्था छैन । भनौं न बैठकका कुरा बाहिर ल्याउन चाहन्नन् माओवादीहरु । तर जब विवादका कुरा आफ्नै नेता कार्यकर्ताले टेपमा रेकर्ड गरेर पत्रकारमार्फत सबैलाई थाहा दिन्छन्, माओवादी शीर्ष नेताहरु आक्रोशित हुनेबाहेक उपाय हुन्न । त्यही भएको छ ।
त्यसो त जन संविधान नबने जनविद्रोहमा जाने निर्णय गर्दै एक सातादेखि गोरखाको पालुङटारमा भएको एकीकृत माओवादीको छैठौ विस्तारित बैठक सकिएको छ । जहाँसम्म जनविद्रोहको कुरा छ । यसबारेमा नेताहरुले ढिला पो गरेका छन् कि भन्ने भएको छ । जनविद्रोहको स्पष्ट परिभाषा के भन्नेमा नै अझै स्पष्टता छैन । स्पष्ट भएको भए यो कुरा शान्ति सम्झौता पछिका विभिन्न चरणमा माओवादीले उठाएकै हो । तर पुरा पो भएन ।
सत्ता प्राप्ति देखि लिएर अनेक क्रममा माओवादीहरुले जनविद्रोहको कुरा उठाएकै हुन् । तर यो के का लागि भन्ने पो स्पष्ट भएको छैन । लडाकु समायोजनको बारेमा अन्य दललाई आरोप लगाइएपनि आफ्नै लडाकुबाट खप्की खानुपर्ने माओवादीहरुका लागि बाध्यता बनेको छ । बरु यो खप्कीपछि अबका दिनमा अन्य पार्टीहरुलाई ठेगान लगाएर समायोजनको काम पो कसरी हुने हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
कम्तीमा संयुक्त प्रतिवेदन निकाल्न नसकेपनि नेताहरुले बैठक पार्टीमा बैचारिक एकता कायम गर्न सफल भएको बताएका छन् । बरु विवादलाई पन्छाएर अहिले केन्द्रीय समितिलाई निर्णयको जिम्मा दिने भनिएको छ । बरु अहिले काँग्रेस लगायतका दललाई पो माओवादी बैठकले झस्काएको भएपनि आफ्नै कारणले विवादमा घेरिएको आभास हुन थालेको छ । तर शान्ति र संविधानका लागि जे गर्छौ भनेपनि अब व्यवहार पो हेर्न बाँकी छ सम्पूर्ण दलहरुको । - महेन्द्र ।
नागरिकताको अन्तहीन राजनीति
मधेशवादी दलहरुले जति ठुलो स्वरमा लाखौं नागरिक नियतवश नागरिकताबाट वञ्चित गरिएको भनेर कराउँदै आएका छन्, त्यति नै दृढताका साथ नागरिकता समस्याबारे मधेशवादी दलहरु भारतबाट निर्देशित भएको आरोप लाग्दै आएको छ । अर्थात राजनीतिका हरेक दृष्टिले मधेशवादी दलहरु भारतको पिछलग्गु बनेका छन् भन्ने आरोप छ । यसको उदाहरण पनि देखाइने गरेको छ, खासगरी भारतीयले दिएको निर्देशनअनुसार मधेशवादी दलहरुले गरेको निर्णयपछि ।
यो नागरिकताको विषय विभिन्न आन्दोलन हुँदै अहिले आएर निर्वाचन आयोगले गर्ने गरेको मतदाता संकलनमा आएर फेरि अल्झीएको छ । अर्थात मधेशवादी दलहरुको धम्कीकै आधारमा निर्वाचन आयोगले नागरिकता नभएपनि मतदाता नामावली संकलन गर्ने काम सुरु गर्‍यो । त्यो पनि सत्ताको लोभमा ठुला दलको दबाबमा परेर । दुइपटक हारेका व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनेपछि निर्वाचन आयोगको साख त यसै गिरेको थियो ।
यो विषयमा धेरैले आपत्ति पनि जनाए । खासगरी गैरनेपालीलाई पनि नागरिकता वितरण हुने भयो भनेर । तर मधेशवादी दलले कुरै सुन्ने भएनन् । अन्य दलले पनि कानमा तेल हालेजस्तो गरेर बसे । त्यसको परिणामस्वरुप निर्वाचन आयोगले जे भनियो त्यही गर्न बाध्य भयो । न कि निर्वाचन आयोगले गलत मान्छेको नामावली संकलन गर्दा देशको राजनीतिमा के असर पर्ला भन्ने कुरा सोच्न सम्म पनि भ्याइएन । यस्तो पो भयो दबाबको परिणाम त ।
यही विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले नागरिकता नभएकाहरुलाई मतदाता नामावलीमा समावेश नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । निर्वाचन आयोगले नागरिकता नभएपनि मतदाता बनाउन सकिने निर्णय गरेपछि सर्वोच्चमा परेको रीटमा अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको छ । तर मधेशवादी दलले लगत्तै आन्दोलन थाल्न बेर छैन । किनभने राजनीति र लडाइँमा जे पनि मान्य हुने रहेछ ।
त्यसैले सरकारको र्‍याल काढेर ठुला दलहरुले सर्वोच्चको आदेशलाई सम्मान गर्दै मधेशवादी दलहरुलाई फकाएर हुन्छ कि सचेत गराएर हुन्छ कि, यो नागरिकताको विषयमा आएको कुरामा सर्वसम्मति गर्न सक्नुपर्छ । सत्ता र सरकार पो अहिलेको विषय होला, मतदाता पाउने भनेको त वर्ष वर्ष सम्मको कुरा हो नि, राजनीति गर्नेहरुले यस्तो कुरामा ध्यान नदिए के मा ध्यान दिने त ? - महेन्द्र ।
पुरानै द्धन्द्ध सुरु हुने चिन्ता
संविधान, सरकार, सेना समायोजनबारे दलहरुका भनाई र गराई कसैको पनि पत्याइसक्नु छैन । अझ नेताहरुका कुरा, काम गराई, गतिविधि हेर्दा त अमेजनको जंगलको बीचमा केही पनि उपकरण नभइकन छाडिएको जस्तो अलमलमा पर्ने अवस्था छ अहिले । किनभने आरोप प्रत्यारोप उस्तै छन्, के कुराले अगाडि बढ्न दिएको छ कि छैन, जति बुझ्न खोज्यो त्यति कठिन बन्दै गएको छ ।
संविधान नबनाउने भन्दै लाग्ने गरेको आरोप सबैभन्दा बढी प्रख्यात छ । एकीकृत माओवादीका नेताहरुले काँग्रेस एमालेका नेताहरु नै गम्भीर भएको आरोप लगाउन थालेका छन् । माओवादी इतरका नेता तथा विज्ञहरुले एकीकृत माओवादीको नेतृत्व शान्तिपूर्ण राजनीतिको पक्षमा नरहेको स्पष्ट भएको जिकिर गर्न थालेका छन् । पछिल्लो माहौल यसरी तात्नुको कारण भने विस्तारित बैठकअघि सार्वजनिक भएका माओवादी शीर्ष नेताका दस्तावेजका कारण हो ।
माओवादी विस्तारित वैठकमा पेश गर्न तयार पारिएका माओवादी नेताहरुका दस्तावेज मुलुकलाई पुनः युद्धमा फर्काउने खालका भएको काँग्रेस एमालेका नेताहरु बताउँछन् । दस्तावेजको कुरा मात्र नभएर शिविरका लडाकुलाई समेत विस्तारित बैठकमा सहभागी गराइने विषयलाई लिएर चर्को विवाद सुरु भएको छ । हालसम्म माओवादी खासै बोलेको देखिन्न भने अन्य दलले त्यसको उछितो काढेका छन् ।
संविधानका विवादित विषयमा सहमति हुँदै जाने अवस्थामा यो अवस्था आउनुले भने सबैलाई चिन्तित तुल्याएको छ । कुरा यत्ति हो कि, दोष कस्लाई दिने, जिम्मेवारी कस्लाई दिने । पत्ता लगाउनै गाह्रो छ कि, के कुरा सही हो । व्यक्तिपिच्छे, विश्लेषकपिच्छे पक्ष र विपक्षमा कुरा आइहाल्छन्, को होला र खै स्वतन्त्र विश्लेषण गर्ने, चाहे माओवादीतर्फ होस्, चाहे काँग्रेस एमालेका । यसैबाट नै जन्मिने हो कि, अराजकता भन्ने चिन्ता पो छ ।
युद्धमा फर्काउने, जनविद्रोहमा जाने जस्ता विषयलाई शान्तिप्रक्रिया सुरु भएयता खासै आपत्तिजनक तरिकाले उठाइने नगरेको भएपनि यो समयमा यसरी आउनुलाई भने बडो गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने भएको छ, शान्तिप्रेमी नागरिकहरुले । भन्न त भन्छन् युद्धरत अर्थात द्धन्द्धरत दुवै पक्षले शान्ति नै चाहिएको छ भनेर । गर्ने बेलामा भने अर्कै । - महेन्द्र ।
असमान भन्नुको अर्थ के ?
भोग्नेहरुले अनुमान गर्न गाह्रो छैन कि राजनीतिक दलका नेताहरुले बजेट असमान हुने डर भन्दै अबका दिनमा दिनका दिन डेलिगेसन लिएर सरकारका प्रमुखहरुकहाँ जान्छन् । बजेट असमान हुने डर सबैलाई हुन्छ । तर डेलिगेसन जानुको अर्थ भनेको अर्कै पो हो कि भन्ने शंका पनि जाग्न थालेको छ ।
सुझाव दिन जाने बहानामा दलहरुले अर्थात दलका नेताहरुले आफ्नो पक्षमा वा आफुले सिफारिस गरेअनुसार बजेट बिनियोजन गर्ने सम्भावना बढ्ने देखिएको छ । जुन पहिले पनि हुने गरेको थियो । अहिले पनि त्यत्तिकै छ । तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका नेताहरुले यसपटक पनि असमान ढंगले वजेट विनियोजन हुनसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
समान भनेको के ? बजेट विनियोजन गर्नका लागि बजेट विनियोजन गर्नेहरुले मान्नुपर्ने नियम छैनन् र ? नियम नै नमान्ने हो भने त आफ्नो जिल्लालाई काठमाण्डौंमा जस्तै सुविधा दिए भइगयो नि । सम्बन्धित क्षेत्रमा विशेष सुविधा दिए पनि भैगयो नि । सबैले नियम पालना गरिदिने हो भने त समस्या नै नहुनुपर्ने हो । तर कुरो अर्कै भइरहेको छ ।
तमलोपा समान ढंगमा भन्दै, माओवादी जनवादी भन्दै, काँग्रेसले लोकतान्त्रिक भन्दै, एमाले सही तरिकाले भन्दै बजेट विनियोजनको निर्देशक बन्न जाने भनेको दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा धेरै छैन । पहुँच हुने वालाहरुले डडेल्धुरा जस्ता जिल्लामा थुप्रै काम गरेका पनि छन् । तर पहुँच नहुनेले त्यहीं नजिकै नहुनेले पनि केही गरेका छैनन् । नीति पनि छैन, निश्चित मापदण्ड पनि छैन जस्को शक्ति उसैको भक्ति भएको छ ।
अब कुरा आउँछ कि, प्रधानमन्त्रीको बालुवाटार र सिंहदरबारमा छिर्न नसक्नेहरुको हालत के होला खै । उही टुकी बाल्ने, धुलोमा पैदल यात्रा गर्ने, बिरामी भए एकमात्र मृत्युको विकल्प मान्न बाध्य हुने, समाजमा अन्याय खेप्ने, त्यही त भएको छ नि । त्यही भएर दलहरुले राजनीति नै गर्ने हो भने घुमाउरो भाषा बन्द गर्नुपर्छ । बजेट ल्याउने कुरा राम्रो हो । बजेट आएपछि साधारण खर्चतर्फ राम्रै हुने होला । तर विकासका काममा भने ठुलै चलखेल हुने इतिहास नदोहोरिएला र, के भन्न सकिन्छ र । - महेन्द्र ।
संसदीय समितिलाई अधिकार दिएपनि ठीकै
हुन त राजनीतिकर्मीहरु खासगरी दलसम्बद्ध नेताहरु कुटनीतिका लागि निकै माहिर हुन्छन् भनिन्छ । त्यसक्रममा उनीहरुले निकै लोकपि्रय तर वास्तवमा बुझ्दै जाँदा प्रचारात्मक काम मात्रै गरेको पनि पाइन्छ । उदाहरणको लागि पछिल्लो समय संसदीय समितिहरुले गर्ने कामलाई लिन सकिन्छ । यसमा अरु भन्दा पनि सार्वजनिक लेखा समिति अगाडि भएको पाइन्छ । सार्वजनिक लेखा समितिले जहाज खरिदका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिवलाई दबाब दिएको भन्ने सम्बन्धमा सोधपुछ गर्न प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई नै समितिमा बोलाएको छ ।
हो, यस्ता अनियमितता र गुण्डागर्दीका काममा प्रधानमन्त्रीको नै नाम आउनु निकै लाजमर्दो विषय हो । गुण्डागर्दी नियन्त्रण गर्न बसेका मुख्य कार्यकारी नै धम्कीको भाषा प्रयोग गरेको भनेर संसदीय समितिमा आलोचित भएपछि पद नै छाड्नुपर्ने हो नि । हुन त अहिले पनि प्रधानमन्त्री पदमा छैनन् तर पनि उनले यस्ता कुरामा विवाद आएपछि केही बोल्नुपर्ने । देशका नानाथरी समस्याका बारेमा निकै चिन्ता भएजस्तो गर्ने नेताले आफ्नो व्यक्तित्वका बारेमा आएका चर्चाका बारेमा स्पष्टीकरण दिनैपर्ने हो । तर त्यसो भएन ।
भनिन्छ नि, पहिला आफ्नो अनुहार हेर्ने अनि बल्ल समाज र देशको अनुहार परिवर्तन गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । अर्थात परिवर्तनको सुरुवात आफैंबाट । भाषण गर्न त सजिलै छ नि । गरि पुर्‍याउन पो सकस हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयबाट विभिन्न पार्टीलाई जथाभावी पैसा बाँडिएको भन्ने सम्बन्धमा सोधपुछ गर्न अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई पनि मंसिर २ गते नै बैठकमा बोलाइएको छ । यो पनि अर्को लाजमर्दो भएको छ । दशकौंसम्म सरकारी पदमा बसेर काम गर्ने सरकारी अधिकारीले कार्य अवधिमा कति भ्रष्ट्राचार गर्दा हुन् अब यहींबाट प्रष्ट हुन्छ ।
तर के गर्ने यत्रा यत्रा घटनामा अख्तियार निरीह बन्नुपर्ने बाध्यता छ भने संसदीय समिति भने हिरो बन्ने अवस्था आएको छ । विडम्वना, हिरो बन्ने भनेको केवल जनताका अगाडि मात्रै । कारबाही र प्रभावकारी अनुसन्धानका लागि समिति हात्तीको देखाउने दाँतबाहेक केही पनि होइन । त्यही प्रमाणित भएको छ । खास अधिकार भएको त अख्तियार आयोग हो नि । त्यसलाई निरीह बन्न दिने अनि सांसद कराएर होहल्ला गर्ने चलनले झनै शंका उब्जाइदिएको छ । यसको पो छानबिन गर्ने कि । तर के गर्ने पत्रकारले मात्रै नसक्ने रहेछन् ।
त्यही भएर कम्तीमा संसदीय समितिलाई पनि कारबाहीको अर्थात केही न केही कार्यकारी अधिकार दिएर जाने हो भने न्याय मिल्छ भन्नेमा आशा भने गर्न सकिन्छ । यही प्रक्रिया थाल्ने हो भने कत्रो विरोध हुने होला, खै के आशा गर्नु र । - महेन्द्र ।
बोलिदिए पुग्यो नेताहरुलाई
धेरैले महत्व नदिएपनि नेताहरुको बोलीले तरंग भने ल्याइहाल्छ । कहिले आरोप प्रत्यारोप, कहिले सोच्दै नसोचेको शब्दावलीको उत्खनन् त कहिले अनेक बहानामा अरुलाई गाली गर्ने । त्यतिमात्र होइन, भएका हुने गरेको गोप्य सहमति र छलफलको खुलासा, सबैजसो विषयमा दलका नेताहरु समाजलाई नेतृत्व दिरहनुपर्ने भन्दै नबोली बस्न सक्दैनन् ।
अहिले संविधानसभा भंग, देशलाई असफल राष्ट्र बनाउने अभियान जस्ता विषयमा नेताहरुले बडो अनपेक्षित वा कडा आरोप नै लाग्ने गरी भनाई राख्दै आउने गरेका छन् । यही क्रममा एमाले नेता केपी शर्मा ओलीले एकीकृत माओवादी नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउन लागिपरेको आरोप लगाएका छन् । असफल राष्ट्रबारे नेताहरु अझै स्पष्ट नभएजस्तो छ । किनभने यसको परिभाषा कसरी गर्ने भन्ने नै अन्योल छ ।
जहाँ महिनौंसम्म अर्थहीन प्रधानमन्त्रीको निवार्चन चलिरहन्छ, जहाँ सरकार नभएको लामो समय अनि बजेटको टुंगो बुंगो छैन । आर्थिक वृद्धिदर कमै छ । देशका युवाहरु कामको खोजीमा विदेशमा गइरहनुपर्ने बाध्यता छ । अझ पछिल्लो समय विकसित देशमा स्थायी बस्ने अनुमति लिएर धेरै योगदान दिन सक्ने नागरिकहरु पनि बाहिरिइरहेका छन् ।
ओलीले माओवादी सोच विरुद्ध एमाले सडक संघर्ष गर्न बाध्य हुने बताएका छन् । होइन, केका लागि सडकमा अब । त्यत्रो प्रधानमन्त्रीको कुर्चीका लागि माओवादीले लामै परिश्रम खर्च गरेर सडकमा उत्रँदा त पार लागेन भने अब कसरी लाग्ने नि । त्यो पनि कुनै पार्टीको अडानविरुद्ध । लोकतान्त्रिक भन्ने पार्टीहरुले त कम्तीमा वार्तामा बसेर जाऔं भन्नुपर्छ । हो, वार्ता पनि दिक्क लाग्ने भइसकेको छ ।
दिक्क लाग्ने भएको भएको हुनाले गम्भीर हुन भने अत्यावश्यक भइसकेको छ । किनभने प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनजस्तै वार्ताको श्रृंखला त्यो पनि वार्तामा बस्ने सदस्यहरुको बनिबनाउ जवाफले त अखबारका पाना पनि पुरानै हुन् कि, साथै अन्य माध्यमका समाचार पनि पुरानै हुन् कि भन्ने भान पर्न गएको छ । त्यसैले अर्थहीन कुरा छ भने नबोलिदिए त भइहाल्थ्यो नि । - महेन्द्र ।
शीर्ष नेताहरुको नै केटाकेटी पारा छ
स्कुले उमेरमा एक पटक लहर आउँछ, साथीहरुसँग उतिबेलै रिसाउने, उतिबेलै खुशी हुने त कहिले लडाइँ गर्न पनि पछि नपर्ने । धेरैजसोको बाल्यकालमा अर्थात किशोरावस्थामा यो चरण एकपटक आउनेगर्छ । अहिले देशको प्रमुख शक्तिमा रहेका दलका नेताहरुमा पनि त्यही केटाकेटी पारा स्पष्टै देखिएको छ ।
अरु केही नभएर प्रत्येक वर्षजस्तो यसपालि पनि चियापान गर्न निकै फुरेका छन् नेताहरु । फुर्ने क्रम प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी, सत्तासाझेदार काँग्रेसदेखि लिएर अन्य फि्रन्ज पार्टी पनि छन् । डाकिएका मान्छे जाउन् कि नजाउन्, अर्थात त्यसको कुटनीतिक महत्व रहोस् कि नरहोस्, मुख तताउनकै लागि भएपनि चियापान आयोजना भएकै छन् । बरु सञ्चारकर्मी, कुटनीतिज्ञ, अन्य दलका नेताहरुलाई कता कता जाने भ्याइ नभ्याई ।
चियापान, राजनीतिक, आर्थिक, कुटनीतिक दृष्टिले भइरहन्छन् । केही हदमा राम्रो पनि हो । तर यही चियापानको विषय सहमतिको भन्दा विवादको जरो बन्यो भने के होला ? प्रधानमन्त्री माधव नेपालले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई र प्रचण्डले माधव नेपाललाई प्रत्यक्ष रुपमा कतै गाली गरेको वा नराम्रो शब्द प्रयोग गरेको थाहा पाइन्न । तर उनीहरुबीचको मनमुटाव भने अब छिपेको छैन ।
कारण स्पष्टै छ, प्रधानमन्त्रीले आयोजना गरेको चियापानमा माओवादीका अन्य नेता गएपनि प्रचण्ड जान भ्याएनन् अर्थात गएनन् नै । कम्तीमा एकजना नगएपनि अर्का गएर मेलमिलाप गरे त भइहाल्थ्यो नि । मनमुटाव गरेर कहिलेसम्म दुनियाँ हँसाउने । किनभने दुवै नेताले राजनीति गर्ने भनेको त नेपालमै हो, जति गाली भारतलाई गरे पनि । भारतलाई गाली गरेपनि, माया गरेपनि राजनीति त नेपालमै होला ।
बरु अर्को केटाकेटीपन के देखिएको छ भने नेताहरुले फेरि पनि रेडिमेड जवाफ दिएका छन्, केही दिनमा सहमति बन्छ भनेर । त्यस्ता केही दिन त कति आए कति आए । मानिसहरुलाई सधैंभरि आशावादी मात्रै बनाउनुभन्दा त कम्तीमा केही नबोल्नु नि । माइक र क्यामरा अनि पत्रकार देखेपछि प्याच्च बोलिहालेर समाचार बोलिहालने प्रवृत्ति पनि केटाकेटी जस्तै नै हो । - महेन्द्र ।
व्याख्याता बाहेक माथि उठ्ने कहिले ?
व्याख्याता मात्रै बन्ने रोगले राजनीति गर्ने लाई धेरै नै छोएको छ भनिन्छ । कुरो सही पनि हो । तर सधैं सही नहुन पनि सक्छ । जे भएपनि राजनीतिक खेलाडीहरुका गतिविधिहरुले भने नकारात्मक कुराका लागि नै बाटो खुला गरिदिने गरेका छन् । के पहाडी, के हिमाली अनि के मधेशी सबै ठाउँका राजनीतिज्ञलाई यो आरोप लाग्ने गरेको छ ।
मधेशी नेता तथा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पनि त्यही प्रमाणित गरिदिएका छन् । उनले तराईमा हत्या हिंसामा संलग्न रहेका भूमिगत संगठनलाई राजनीतिक भन्न नमिल्ने भनेका छन् । उनले व्याख्या गरिदिए कि, उनी कुनै नयाँ महादेशबाट आएका हुन् भनेजस्तो गरी । हुनुपर्छ, भूमिगत संगठनमा संलग्नहरु उनकै पुर्व पार्टी काँग्रेस, अहिलेको पार्टीका पुर्वकार्यकर्ता पनि ।
यो कुरा राम्ररी थाहा हुँदाहुँदै उनले हिंसा गर्ने राजनीतिक संगठन होइन भनेर सजिलो शब्दावली बोलिदिए । हो, उनका जनताका लागि गाह्रो भन्दा पनि सजिलो शब्दावली प्रयोग गर्नु उपयुक्त हो । तर सजिलो भन्दैमा उनले त्यत्रो वर्ष राजनीति गरेको अनुभवलाई हावामा उडाएर त भएन नि । बरु भूमिगत संगठनका माग पुरा गर्न, कम्तीमा पनि एकजना मधेशी नेता भएको हुनाले, उनले पहल गर्नुपर्ने हो ।
आफ्नै क्षेत्रका लागि लडेका भनिएका ती लडाकाहरुलाई चिढ्याएर सर्वसाधारणकहाँ लुटपाट अपहरण र हत्या बाहेक के होला ? किनभने उनीहरुलाई सिकाउने त वरिष्ठ नेताहरुले न हो । खै त भएन । उनले प्रमुख तीन दलको सत्तामोहले गर्दा संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया ओझेलमा परेको आरोप पनि लगाएका छन् । ठीक छ, ठुला दलहरुसँग उनको टकरावलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्ला ।
तर आफुजस्तै क्षेत्रीयताका लागि लड्ने समुहलाई फकाएर, फुलाएर वा चड्कन हानेर जसरी भएपनि सही बाटोमा ल्याउने काम त उनैको पो हो नि । त्यतिमात्र होइन ठाकुर जस्तो शालीन व्यक्तिले आफुभन्दा निकै कनिष्ट मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई दोधारे चरित्रको व्यक्ति भन्दै आफ्नै उचाइ घटाएका छन् । त्यसैले एक कदम माथि उठ्नुपर्ने आवश्यकता छ हो, राजनीतिज्ञज्यूहरु । - महेन्द्र ।
November 06, 2010 7:27 am
नेताहरुको तिहार चैं फाइभ स्टार
सहमति हुन नसक्नु आफैंमा खुशीको कुरा होइन । बरु यो त तिहारको बेलामा निराशाजनक कुरा पो भएको छ । तिहारको समयमा आफ्ना नजिकका मान्छेसँग बसेर राजनीतिलाई गतिलोसँग नियालिरहेका नेपालीहरुले फेरि पनि निराश हुनुपरेको छ । तर जसरी, वार्ता भयो, यसलाई भने सकारात्मक रुपमै लिनुपर्छ ।
सहमति नहुँदा भने अर्कै तरिकाले आशंका गर्ने पनि छन् । भन्नेहरुले भनेका छन् कि, तिहारको बेलामा नेताहरुले रिसोर्टमा गएर कौडा खेले । किनभने राजनीतिक गतिरोध अन्त्यको उपाय खोज्न प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुबीच काठमाडांैदेखि दक्षिणको काँठ फर्पिङस्थित हात्तिवन रिसोर्टमा दुइ दिनसम्म चलेको वार्ता विना निष्कर्ष टुंगिएको छ । लगातार ३० घण्टा जति नेताहरु एकै ठाउँमा बसेर छलफल गरेपनि ठोस उपलब्धी भने हासिल हुन सकेन ।
जे भएपनि तीस घण्टा एकै थलोमा बसेर वार्ता गर्नु सानोतिनो कुरो होइन । केही न केही सहमति गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर यति प्रयास गर्दा पनि निष्कर्षमा पुग्न नसक्नु भनेको धेरै नै गम्भीर मतभेद छन् दलहरुमा भन्ने स्पष्ट भएको छ । पछिल्लो समयमा कुरो नमिल्दा धम्की दिन समेत पछाडि नपर्ने दलहरुले यो बैठकमा के गरे त्यो त थाहा भएन, किनभने पत्रकारलाई जानै दिइएन । यति अनुमान गर्न सकिन्छ कि, वार्ता चाहिं गम्भीरै भयो ।
वार्तामा उल्लेखनीय उपलब्धी हासिल हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिएपनि नेताहरुले वैठकमा गहन र सकारात्मक छलफल भएको दाबी भने गरेका छन् । वैठकपछि तीन दलका शीर्ष नेताहरुको हस्ताक्षरसहित जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा विगतका सहमतिहरुको कार्यान्वयन, शान्तिप्रक्रिया, नयाँ संविधान, पूर्ण बजेट ल्याउने विषयमा वैठकमा सघन छलफल भएको र आगामी २४ गते पुनः यिनै विषयमा थप छलफल गर्ने सहमति भएको उल्लेख छ ।
जति जे भएपनि वार्ता भएको छ, तिहारको चाडबाडका बेलामा पनि काम त भएकै छ भन्ने भएको छ । अर्को वार्तामा भने दलहरुले निकास निकाल्नैपर्छ । शायद दबाब अझ बढ्ने आशा गर्न सकिन्छ, दलहरुलाई तिहारपछि पनि । सहमति नगर्दा भने नेताहरुले वाहीवाही भन्दा बढी आलोचना नै खानुपर्ने अवस्थालाई भने परिस्थितिको उपज नै भन्नुपर्ला । - महेन्द्र ।
चर्को दबाबपछिको खटपटीको परिणाम
प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारलाई बन्देज विरुद्ध भन्दै नेपाली नेताहरु निकै बोल्छन् । अधिकांश समय प्रेसमैत्री पनि देखिन्छन् । तर सधैं भने त्यस्ता छैनन्, वरिष्ठ नेताहरु पनि । अर्थात सोझो तरिकाले भन्नुपर्दा उनीहरु भनेजति अर्थात आश्वासन दिएजति उदार भने छैनन्, पछिल्ला घटनाक्रमले त्यही देखाइरहेका छन् । त्यसो त भन्ने एउटा तर गर्ने बेलामा अर्को, धेरैजसो पाइने स्वभाव पनि हो यो ।
यही क्रममा राजनीतिक गतिरोध अन्त्यको उपाय खोज्न भन्दै प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुले काठमाण्डांैदेखि दक्षिणको काँठ फर्पिङस्थित हात्तिवन रिसोर्टमा वार्ता गरेका छन् । लगातार छलफल गरी एउटा निष्कर्षमा पुग्ने भन्दै शीर्ष नेताहरु राजधानीबाट केही परको रिसोर्टमा गोप्य वार्ताका लागि पुगेका त छन्, तर उनीहरुले वार्ता स्थलमा संचार कर्मीलाई पनि जान दिएका छैनन् ।
सञ्चारकर्मीले त त्यही वार्ताका कुरा जनतालाई सुनाउने र देखाउने न हुन् । जनताकै लागि भनेर लाग्ने गरेका नेताहरुले आफुहरुले गर्ने कुरा, सहमतिको जानकारी दिन किन नखोजेका हुन् बुझिनसक्नु छ । शीर्ष तीन दल नै छन्, सबैले किन यसरी पत्रकारलाई पाखा लगाउन खोजे कुन्नि । रिसोर्टमा गएको भन्दैमा पत्रकारलाई त्यहींको खान्की र बास दिनुपर्ने पनि त थिएन । नेताहरुले खाए बसे भइहाल्थ्यो ।
अझ गोप्य नै छ भने नभने कुरै सकिन्थ्यो । गोप्य पनि भन्ने, सबै कुरा सार्वजनिक गर्ने अचम्मै छ । तर यसको कारण हुनसक्छ, निरन्तरको दबाब । नागरिक तह, बुद्धिजीवी, सबै क्षेत्रबाट दबाब आइरहेको छ नेताहरुलाई सहमति गर्नका लागि । बिचरा, सहमति पनि गर्न नसक्ने दबाब पनि सहन नसक्ने, त्यही भएर हिमालतिर जाने भनेपनि टिका लगाउने आशाले पनि होला, काठमाण्डौंमा वार्ता गरेका ।
तर अनावश्यक कुरा त के छ भने समाचार संकलनका लागि गएका संचारकर्मीलाई प्रहरीले रिसोर्ट भन्दा निकै वर रोकेको छ भने प्रहरीले संचारकर्मीमाथि हातपात समेत गरेको छ । गोप्य वार्तामा निस्कनु अघि तीनै दलका नेताहरु विहान सिंहदरबारमा भेला भएका थिए । आफ्ना गाडी सिंहदरबारमा छाडेर उनीहरु गृहमन्त्रालयले व्यवस्था गरेको पर्यटक वसमा चढेर हात्तिवनतर्फ लागेका थिए । शीर्ष नेताहरु सिंहदरबारमा भेला भएको थाहा पाई समाचारका लागि पुगेका संचारकर्मीलाई सिंहदरबारमा समेत प्रवेश गर्न रोकिएको थियो ।
गज्जब गर्छन् । यो प्रधानमन्त्रीको बुद्धि होला, पर्यटक बसमा चढ्ने उपाय । यसैगरी प्रधानमन्त्रीले काठमाण्डौंको चक्कर लगाएका थिए । के गर्ने पत्रकारलाई झुक्याएर रिसोर्ट गए पनि जनतालाई ढाँट्न मिलेन क्यार । एकजनाले लेख्दै थिए, कौडा खेल्न त थालेनन् नेताहरु, भनेर । त्यसो नभएपनि सहमति होला भन्ने आशा चाहिं गरौं । - महेन्द्र ।
October 30, 2010 5:53 am
कुटेरै ठाउँमा ल्याउने माओवादी रणनीति
किन सुस्ताएको भनेर कसैले सोध्यो भने माओवादीहरु भनिहाल्छन् कि यो विद्रोह, धक्का तयारी हो । यसलाई समुद्रको तुलना गरेर सुनामी आउने बेलामा समुद्र शान्त नै रहन्छ भनेर भए जतिका भनाई, उखान टुक्का प्रयोग गर्न पनि माहिर नै पाइन्छन् माओवादी नेता कार्यकर्ताहरु । पछिल्लो समयको परिस्थितिलाई पनि त्यसैसँग तुलना गर्न उपयुक्त छ ।
प्रधानमन्त्री निर्वाचनलाई लिएर काँग्रेसले राखेका मागको सुनुवाई गर्न अल्छी लागेर वा उनीहरुको आफ्नै कारणले माओवादीले कुट्ने कामलाई केही सुस्तता दिएका थिए । तर थप आलोचित हुनेगरी उनीहरुले कुट्ने रणनीतिलाई फेरि तीव्रता दिन थालेका छन् । प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी रामचन्द्र पौडेलले फिर्ता नलिएपछि कुटेर भएपनि ठीक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ भन्नेसम्म उनीहरुको मान्यता हुनसक्छ, वा नहुन पनि सक्छ ।
जे कारणले भएपनि स्याङजाको क्याक्मी गाबिसमा माओवादी आक्रमणमा परी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका ८ जना कार्यकर्ता घाइते भएका छन् । क्याक्मी गाबिसमा बिद्युतिकरण गर्ने बिषयमा गाबिस कार्यालयमा संयन्त्र बैठक बसिरहेको अबस्थामा माओवादीका जिल्ला सदस्य प्रेम हमाल बगरको नेतृत्वमा आएको समुहले कांग्रेस र एमालेका कार्यकर्तामाथि कुटपिट गरेका हुन् । बैठक बसेर विकासका कुरा गर्ने बेलामा ठोकिहालेछन् ।
कुटाई खाएको चौबीस घण्टा नबित्दै काँग्रेसका अर्जुननरसिंह केसीले पनि आइलाग्नेलाई जाइलाग्न भनेर रीस पोखेका छन् । पुर्णकालीन कार्यकर्ता नभएर बडो गाह्रो परेको छ भन्दै थिए, केही मानिसहरु, त्यसैको प्रभाव पो हो कि, यो घटनाक्रम । अब त्यसो हो भने त कहिलेकांही काँग्रेस वृत्तमा उठ्ने गरेको लडाकु दस्ता स्थापनाको मागलाई पनि सम्बोधन गर्नतर्फ ध्यान दिने पो हो कि ।
त्यसो त स्पष्टीकरण सोध्यो भने माओवादी नेताहरु ढुक्कले भन्ने गर्छन् कि कुट्नुको कारण केन्द्रीय नेतृत्वको रणनीतिसँग सम्बन्ध राख्दैन । कुरा र काम जसरी गरेपनि शक्तिखोरको प्रचण्डको टेपजस्तो स्पष्ट प्रमाण पाउन गाह्रो हुन्छ सधैं । तर दलहरुले लडाइँ र कुटपीटबाटै राजनीति गर्नेमा भन्दा पनि कुटनीतिक तरिकाले राजनीति गर्दा फाइदा हुन्थ्यो नि । लडाइँबाट जित्ने भए त तालिवानले जित्थ्यो होला । - महेन्द्र ।
पौडेललाई पछारिरहेका त छैनन् उनका साथीहरु ?
एक पटक, दुईपटक, तीनपटक, चारपटक गर्दा गर्दा १५ पटक हुन लागिसक्यो । नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले उम्मेदवारी फिर्ता लिने छाँटकाँट नै छैन । हो, यो उनले व्यक्तिगत इच्छाका आधारमा चुनाव लडिरहेका होइनन् । उनको चुनाव लडाइँ आफ्नो दृढता अनि केन्द्रीय सदस्यहरुको सल्लाहमा पनि आधारित छ । यति मात्र होइन उनका सहयात्री अन्य पार्टीका मित्र तथा बुद्धिजिवीहरुले पनि उम्मेदवारी फिर्ता नलिन सल्लाह दिएका होलान् ।
अहिलेको अवस्थामा उम्मेदवारी फिर्ता नलिनु निकासका लागि एक प्रकारको अडानका रुपमा लिन सकिएला । जति अडानका रुपमा लिने गरिन्छ, त्यति बाधकका रुपमा पनि देखिएको छ । तर यो दलपिच्छे आउने धारणामा भर पर्ने गरेको छ । समग्रमा भन्ने हो भने त उम्मेदवारी फिर्ता नलिने र फिर्ता लिएर बस्ने दुवै अनि मुकदर्शक अर्थात तटस्थ बस्नेहरु नै दोषी हुन् नि । कसरी समीकरण बनाउँदा सरकार बन्छ भन्ने गणित राम्रै जान्जान्दै अहिले जति नाटक भइरहेका छन्, स्पष्ट छन् । लुकेकै छैनन् ।
पौडेलको बारेमा कुरा गर्ने हो भने नयाँ कार्यसमितिको बैठकमा सबैजसो सदस्यहरुले शान्ति प्रक्रियाको टुंगो र नयाँ संविधानमा सहमति नभएसम्म प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी फिर्ता लिन नहुने पक्षमा आफ्ना धारणा राखेका छन् । यो पनि प्रतिस्पर्धी दलहरुसँग बार्गेनिङ गर्ने एउटा तरिका हो भन्न पनि सकिएला । तर यसको असर कतिसम्म परेको छ भनेर दलका नेताहरुले गहिरिएर सोच्ने बेला आएको छ । के बजेट, सरकार सबै अन्योलमा राखेर भएका टक्करबाजी निकास दिनका लागि पर्याप्त छन् त ?
हो, केन्द्रीय सदस्य र उनका शुभचिन्तकहरुले दलीय सहमतिको दबाबका लागि उम्मेदवारी फिर्ता नलिन सुझाव दिएका छन् । आफ्नै ठाउँमा छ यो कुरा । तर पटकपटकको निर्वाचनले अन्य दललाई हरेस खुवाउला । पौडेलले यत्रो वर्ष गरेको राजनीति बेकार हुने त होइन, सोचेका होलान् कि नहोलान् उनका साथीहरुले । हो, उनी कति सफल भए, असफल भए भन्ने कुरा अर्को पाटो हो । तर उनी पार्टीको एक वृत्तमा लोकप्रीय नभइकन नेता भएका त होइनन् ।
त्यही भएर पौडेल स्वयंले ढिलै भएपनि यो दौडमा के गर्ने भन्नेमा सोच्ने बेला आएको छ । सधैंभरी विपक्षी नेताहरुको गाली, समाचारपत्र र पत्रिकाहरुमा कार्टुनको कारक बनेर दुनियाँ हँसाउनु भन्दा सकेसम्म छिटै अर्को बाटो अपनाउँदा राम्रो होला कि । तर नयाँ कार्यसमितिको सल्लाह भने जे भइरहेको थियो, त्यहीअनुसार आइरहेको छ । फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने पनि होलान्, तर कम्युनिष्ट नेताझैं प्याच्च नबोल्ने हुनाले काँग्रेसको त्यो धार बाहिर नदेखिएको पो हो कि । - महेन्द्र ।
टिठलाग्दो छ, दलहरुको झारा टराई
संविधान लेखनमा रहेका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन बनाइएको कार्यदल जतिपटक बैठकमा बसेपनि हात लाग्यो शुन्य हुने सम्भावना टड्कारो हुँदै गएको छ । मौलिक अधिकार अन्तर्गत सम्पत्तिको अधिकारको विषयमा छलफल भएका छन् दलका नेताहरुको बैठकमा । तर बैठक, यो मात्रै हैन यसअघिका पनि खेर नै गएका छन् ।
संविधानसभाले संविधान बनाउने भनेर समितिहरु बनायो । ती समितिहरुका प्रत्येक पदमा भएका नेताहरु तिनै दलका नै हुन् । हो, सबै समितिमा, जिम्मेवारीमा तिनै शीर्ष नेता बस्ने कुरा आएन । उनीहरुको समयले भ्याउने कुरा पनि भएन । कम्तीमा लाजले भए पनि ती नेताहरुले सबै पदका जिम्मेवारी लिन्छु भन्न पनि सकेनन् होला । कसैले केही नभन्ने भए त सबै जिम्मेवारी आफैं लिन्थे होला ।
कस्तो अचम्म भएको छ भने, कार्यदलले विवाद समाधान गर्ने भनेर समय बढाइ बढाइ काम देखाउन खोजिएको छ, तर संयोजक नै चीन घुम्न व्यस्त छन् । प्रधानमन्त्री निर्वाचनको १४ औं पालो आइसक्न लाग्यो रामचन्द्र अझै थाकेका छैनन् । संवैधानिक समिति, अनेक विषयगत समितिका सभापतिलाई संविधान निर्माणको बारेमा थाहा कम छ, बढी थाहा छ, त केवल दलहरुले बनाएका समितिका प्रतिनिधिलाई, अरुलाई थाहा हुने सञ्चारमाध्यममार्फत नै हो । यस्तो त अचम्मै भयो ।
हो, विवाद भएका थिए, ती विवाद पनि त नेतृत्वकै सहमतिमा थिए होला नि । अहिले आएर ठुला नेताहरुले सहमति जनाए हुने अरे, उतिबेला चाहिं संविधानसभाको म्याद एक वर्ष बढाउने गरी किन सहमति गर्न सकिएन र अहिले शीर्ष नेताहरुकै समितिबाट जानुपर्ने ? बुझिनसक्नु छ । हो, विवाद समाधान भएन, फेरि समय थप्नुपर्‍यो भन्ने अवस्था आउनु राम्रो थिएन । केही नि नहुनुभन्दा सहमति भयो भने ठुलै कुरा हुनेछ, तर पनि प्रक्रियाका कुरालाई लातै हाने नेताहरुले त ।
गत असोज २६ गते माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले विषयगत समितिमा देखिएका २ सय २० वटा विवादित विषयमा सहमति जुटाउने भनिएको छ । तर सहमति भन्दा पनि दलका नेताहरु प्रश्न कसरी हटाएर पन्छिन सकिन्छ भन्नेम उद्दत छन् । यो स्पष्ट भइसकेको छ । आखिर विवाद जहाँका त्यहीं । - महेन्द्र ।
सुदले खाएको जुत्ताले औपचारिक विवाद ल्याउने भो
माओवादीका एक नेताका अनुसार भारतीय राजदुतले प्रचण्डलाई भेटेर कुटनीतिक कुरा गर्नुभन्दा पनि हेपेर अनेक दबाब दिए रे । तमलोपाका एक सभासद माओवादीमा आएपछि तहल्का नै मच्चिएको थियो । ती सभासद माओवादीमा आएपछि भारतीय राजदुतावासका कर्मचारीले धम्क्याएको भन्ने विषयले तातै बहस निम्त्यायो ।
बहससँगै माओवादी र भारतको सम्बन्धमा चिसो बाहेक तातोपन आएन । त्यही भएर राकेश सुदले प्रचण्डलाई भेटेर सभासदलाई किन कारबाही नगरेको भनेर थर्काए रे । उनका अनुसार माओवादी रिसले चुर हुनुमा भारतीय कुटनीतिज्ञको हेपाहा प्रवृत्ति हो । त्यही रिस सुदमाथि जुत्ता प्रहार भएको समेत बताउन ती नेता पछि परेनन् । उनले भनिदिए कि, जनताले पो हानेका हुन्, पार्टीको निर्णय होइन ।
सुदसँग माओवादीको टक्करको परिणाम भने भारतस्थित नेपाली राजदुत रुक्मशम्शेरजीले बेहोर्नुपर्‍यो । नयां दिल्लीस्थित नेपाली राजदुत रुक्मशमशेर राणालाई भारतीय विदेश मन्त्रालयले भारतीय राजदुत राकेश सुदलाई माओवादी कार्यकर्ताले सोलुखुम्बुमा जुत्ता प्रहार गरेको बारे सोधपुछ नै गरेको छ । आनन्दले जागिर खान पनि दिएनन् राणाजीलाई । केही दिनमै राजिनामा पो दिने हुन् कि अब ।
नेपाली राजदुतलाई दिल्लीले यसरी मन्त्रालयमा बोलाएर सोधपुछ गरेको दुई दशक यताको दोस्रो घटना हो भनिन्छ । रुक्मशम्शेर यो मानेमा भाग्यमानी रहेछन् थाहा भयो । भन्नलाई अहिले के भनिएको छ भने नेपालका शीर्ष नेताहरु खासगरी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, माओवादी नेताहरु चीन गएपछि भारतको मनमा चिसो पसेको छ । कुरा के हो रुक्मजीले नै भन्लान् ।
वास्तवमा भन्ने हो भने भारतलाई चीन भनेपछि निकै रिस उठ्छ जस्तो छ । के भारतर्मै मात्रै जानुपर्ने हो र नेपालका नेताहरु ? के सधैंभरी नेपाली नेताहरु भारतकै आशामा बस्नुपर्ने हो र ? पक्कै पनि होइन चीन जाँदैमा त्यहाँका नेताहरु भेट्दैमा नेपालको सिमाना बोकेर नेपाल भाग्ला भन्ने चिन्ता गर्नु माथा खराब गर्नु हो, त्यही भएर महामहिमहरु आफ्नो स्थानमा थपक्क बसे हुन्छ, धेरे चर्चो गर्न आवश्यक छैन । - महेन्द्र ।
October 09, 2010 6:59 am
नेपाली राजनीतिको परिप्रेक्ष्यमा नेता भन्नलायकहरु धेरै कम छन् भन्ने कुराको पुष्टि पछिल्ला घटनाक्रमहरुले गर्न थालेका छन् । त्यो कसरी भने, नेताहरुले बोल्दा बोल्दै कताबाट कसरी बोलेका छन् भन्ने थाहा हुन छाडेको छ । अहिले त यस्तो अवस्था आएको छ कि, धेरै कार्यक्रम आयोजकहरुले बडो राम्रो कुरो गर्लान् भनेर बोलायो भने अपेक्षा गरेभन्दा ठीक उल्टो बोलिदिन्छन् अनि सञ्चारमाध्यमले गाली खानुपर्ने अवस्था ।
एकदिन बोलिहाले एमाले अध्यक्ष, संविधानसभाको औचित्य छैन भनेर । अर्को दिन नै खण्डन गरेनन् उनले । बरु दुइ दिन बितेपछि मात्रै खण्डन गरे, त्यो पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा । बोल्ने पनि त्यहीं, खण्डन गर्ने पनि त्यहीं । उनले संविधानसभाको बिघटन गर्ने भनेको कुरा न छापेका, प्रसारण गरेका हुन् सञ्चारमाध्यमले । नभनेका कुरा छापेर कु बहादुरी देखाउनु छ र सञ्चारमाध्यमलाई ।
बरु संसदको औचित्य छैन भन्ने बेलामा संविधानसभाको बिघटन भन्ने फुत्केर त्यस्तो भएको हुनसक्छ । नेताज्यूले टेप र अडियो सुनेर भइहाल्यो नि । किन अनेक लाञ्छना लगाउनुपर्‍यो, आम सञ्चारमाध्यमलाई । नेताहरुको विश्वसनीयता कसरी पनि घटेको छ भने धेरैजसो नेताहरु बोल्ने बेलामा जे पायो त्यही बोल्छन् । उदाहरणका लागि रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीले प्रधानमन्त्री फिर्ता नलिने कांग्रेसको अडान बेठिक नभएको बताएकी छन् ।
अब एमालेले उनीसँग स्पष्टीकरण लिने नै अवस्था आउनेगरी किन बोल्नुपथ्र्यो । हो, उनीसँग स्पष्टीकरण नलिइएला । त्यो कुरा एमाले मुख्यालयको जिम्मेवारीको कुरा हो । तर पार्टीको लाइन एकातिर त्यही पार्टीका नेता बोल्ने अर्कोतिर । असहमति छ भने पार्टीको बैठकमै जोडदार उठाए भइहाल्थ्यो नि । किन बाहिर गएर काँग्रेस हुन खोज्नुपर्‍यो । यसैलाई भनिन्छ कि, अनुशासनको कमी ।
संविधानसभाको बारेमा बडो नाटक गर्ने अर्का पात्र हुन् कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री करिमा बेगम । उनले पनि संबिधानसभा बिघटन गर्नुपर्ने बताएर राजनीतिमा अर्को प्रदुषण बढाएकी छन् । पटक पटकको निर्बाचनले पनि प्र्रधानमन्त्री चयन गर्ने नसकेकोले संविधानसभाको औचित्य छैन भन्नु कति जायज । यो सरासर संविधानसभाको अर्थ नबुझेर हो । यसलाई रोक्ने भगवान बाहेक कोही देखिएनन् यो देशमा । - महेन्द्र ।
October 05, 2010 7:54 am
समय लम्ब्याउने बाहेक केही नहुने भो
दलका बैठकहरु बस्छन् तर उपाय केही लाग्दैन । सरकार गठनको कुरामा उस्तै, संविधान निर्माणका लागि विवादित विषयमा उस्तै, सबै कुरामा उस्तै । गणतन्त्र नेपालको शासकीय स्वरुप कस्तो हुने भन्ने विषयमा पनि दलहरु आ आफ्नै अडानमा रहेपछि संविधानसभाको काम कार्यतालिका अनुसार नहुने पक्का जस्तै भएको छ ।
असोज मसान्तभित्र संविधानसभाका समितिहरुको प्रतिवेदन संवैधानिक समितिमा बुझाइसक्नु पर्ने कार्यतालिका तय भएपनि शासकीय स्वरुप लगायतका विवादीत विषयको टुङ्गो लगाउन दाँतबाट पसिना निस्कने पक्का भएको छ । तर यो पसिना आउनुको कारण भने अरु कोही नभएर विवादका लागि विवाद गर्ने राजनीतिक दलहरु नै हुन् । अर्थात राजनीतिक दलहरुका पनि शीर्ष नेताहरु नै हुन् ।
राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण समितिको प्रतिवेदनमा भएको छलफलमा एकीकृत माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको अवधारणा कायमै राखेको छ । नेपाली कांग्रेसले बेलायती शैलीको संसदीय प्रणालीको अवधारणा भन्दा अगाडि पनि पछाडि पनि र्फकने संकेत नै दिएको छैन । निकै दर्शन र वादका कुरा गर्ने दलहरुको यो चाला देख्दा त यो लाग्छ कि उनीहरु एउटा मात्रै बाटोमा हिंड्न जानेका छन् ।
निकै पढेको कुरा गर्ने नेताहरुले यी बाहेक अरु कुनै उपाय निकालेर तुरुन्त निकास खोजे त भइहाल्थ्यो नि । सक्दैनन् के गर्नु । एमालले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अवधारणा अघि सारेको छ । असोजको अन्तिम हप्ता आउन लागिसक्यो तर पनि कति प्रतिशत काम भएको छ भनेर दलका नेताहरुलाई प्रत्यक्ष बोलाएर सोध्नुपर्ने भएको छ । टेलिफोनमा सोध्ने भने ८० प्रतिशतभन्दा कमको कुरै गर्दैनन् ।
त्यही भएर अबको उपाय भनेको खुरुखुरु धेरै राजनीति नगरेर दलहरुले, किताबका सिद्धान्त पनि नपढीकन, नसम्झीकन अनि धेरै विवाद नगरीकन अगाढि बढ्नु नै उत्तम उपाय होला । त्यसो भन्नेहरुलाई दलहरुले अनेक उपाय लगाएर फुटाइहाल्छन्, उदाहरणको लागि नागरिक समाजलाई लिन सकिन्छ । नागरिक समाज पनि कति चिरा भएको छ गन्न पनि गाह्रो हुने अवस्था आइसक्यो । - महेन्द्र । तस्वीरमा, दलहरुले नहेरेको घडी ।
October 04, 2010 7:30 am
नेताहरुले शब्दकोश पढ्न छाडेजस्तो छ
गणतन्त्र घोषणा हुनअघि केही समयको अन्तराल यस्तो थियो कि, त्यतिबेला राजतन्त्रको विरुद्धमा नबोल्ने कोही हुन्नथे । राजतन्त्र सक्रिय रहेको बेलामा वा त्यसअघि भने राजतन्त्र चाहिन्न भनेर बोल्ने मानिस कम हुन्थे र बोल्ने नै भएपनि खुलेर बोल्न चाहन्नथे । त्यो एक समयको कारण थियो । मानिसहरु चाहेर वा नचाहेर राजतन्त्रका बारेमा त्यति बोल्न चाहन्नथे । तर परिस्थिति परिवर्तन हुँदै गयो ।
जब राजतन्त्रबाट प्रत्यक्ष संचालित शासनव्यवस्थालाई झुकाएर लोकतन्त्रको उदय भयो, त्यसपछि गणतन्त्र घोषणा भएको केही समयसम्म पनि राजतन्त्र र राजसंस्थाका बारेमा मानिसहरुमा नाटकीय परिवर्तन भयो । यसरी नाटकीय परिवर्तन भयो कि, मानिसहरुले केही काम पाएनन्, मञ्चमा बोल्नका लागि कुनैपनि विषय पाएनन् भने राजतन्त्र र राजपरिवारका सदस्यहरुलाई अनेक लाञ्छना लगाउन थाले ।
हुनसक्छन्, धेरै कुरा सही पनि होलान् । तर त्यसरी भनिएका कुराले सधैं राम्रो सन्देश दिन्नन् । किनभने तल्लोस्तरमा झरेर गरिएका गाली र नराम्रा शब्दको प्रयोगले नराम्रो मात्रै सुनिन्छ । लाग्थ्यो कि, त्यतिबेला नेताहरुका, लोकतान्त्रिक आन्दोलनसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुसँग शब्दावलीमा गाली, गाली र गालीबाहेक केही पनि छैन कि भन्नेजस्तो लाग्थ्यो । अहिले पनि त्यही भान हुन थालेको छ ।
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले गणतन्त्र घोषणा भए पनि राजतन्त्रको अन्त्य नभइसकेको बताएर सबैलाई सूचना दिएका छन् । नेताहरु कुन धरातलमा उभिएर बोलेको छु भन्ने समेत हेक्का हुन छाडेजस्तो छ । कुनैकुनै बेला केही मानिसले भन्ने गर्थे कि नेताहरु रक्सी नखाइकन भाषणै गर्न सक्दैनन् भनेर । यस्तो शंका गर्नेहरुलाई यस्ता अभिव्यक्तिले झन् जोड दिएका छन् । त्यही प्रमाणित भएको छ ।
गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न बाँकी भएको भन्ने कुरा सबैले स्वीकार गरेका छन् । यो एउटा प्रक्रिया हो सन्तुष्ट भइहाल्ने भन्ने कुरा पनि भएन । तर राजतन्त्रवादी र गणतन्त्रवादीबीचको संघर्ष जारी रहेको उनको भनाई समयसापेक्ष कुनैपनि हालतमा छैन । राजतन्त्रको वकालत अहिले पनि भइरहेको छ, त्यसलाई खनालले राम्रैसँग ठाउँ दिन खोजेको प्रष्टै छ । यो तरिका छाडेर सरकार बनाउन निर्णायक भूमिका खेले नै उपयुक्त होला । - महेन्द्र ।